Waraaqaha boostarrada: maxay yihiin iyo kuwa ugu fiican | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeeye ahaan, waa inaad haysataa ilo badan oo kala duwan si aad ugu soo bandhigto macaamiishaada aragtiyo kala duwan. Sidoo kale maxaa yeelay waxaad badanaa u baahan doontaa nooc kheyraad ama mid kale oo kuxiran mashruuca. Sidaa darteed, helitaanka ilo kala duwan ayaa lagama maarmaan ah. Hadday yihiin waraaqo boosta lagu qoro, noocyada loogu talagalay sheekooyinka, noocyada cinwaannada ... waa inaad wax walba u diyaargarowdaa.
Xaaladdan oo kale, waxaan dooneynaa inaan diirada saarno xarfaha loogu talagalay boorarka waxaanna kala hadli doonnaa hoosta waxkastoo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga: sida loo doorto, nooca waraaqaha la doorto, iyo tusaalooyinka qaar ee xarfaha naqshadaha. Ma bilaabi karnaa?
1 Warqad qoraal ah - waa tan waxa loo ilaaliyo
1.1 Astaamaha lagu qoro boosta
2 Astaamaha Qoraalka: Waraaqaha Aad Adeegsan Kartay
2.2 Avenir Pro xiga
2.5 Mantra kale
2.8 Waraaq qurux badan
2.9 Warqad qoraal ah: Suuragal maaha
Warqad qoraal ah - waa tan waxa loo ilaaliyo
Boodhadhku kuma salaysna uun sawir. Sidoo kale qaado qaar ka mid ah qoraalka, ama ha yaraado ama ha weynaado. Sidaa darteed, si gacan looga geysto xoojinta farriinta la siinayo sawirka, waxaa muhiim ah in dareenka qofka akhriyaya la qabto, taas oo ah, in aysan arag oo keliya sawirka, laakiin ay akhriyaan qoraalka iyo sida ay u qoran yihiin, natiijadu waxay u egtahay naftaada.
Wada noolaanshahaas boodhadhku ma sahlana in la gaaro. Taasi waa sababta ay u qaadato waqti dheer in la helo furaha. Maskaxda ku hay in ay jiraan noocyo badan oo waraaqo ah oo loogu talagalay boodhadhka, in ay jiraan astaamo aad u kala duwan iyo in, marka lagu daro, mashruuc kasta uu noqon karo mid gaar ah oo u baahan nooc sax ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in boodhadhka, iyo guud ahaan xayeysiinta daabacaadda, aysan mar dambe qaadanayn sidii dhowr sano ka hor, haddana shirkado badan ayaa weli ku sharaddeeya si ay kor ugu qaadaan dhacdooyinka, alaabada, adeegyada ... Waana inay iyagu si weyn u muujiyaan astaanta. , waxay siinayaan dhawaansho dhagaystayaasha bartilmaameedka ah sidoo kale waa mid wax ku ool ah (illaa inta si fiican loo qabtay).
Waxaan ku leenahay tusaalayaal hadda ka muuqda boodhadhka Madrid ee tennis-ka. Dhexdeeda, xarfaha waawayn, waxaa ku qornaa "Madrid waxaan ku suganahay midig," oo tilmaamaysa, ama marka ugu horeysa taasi waa sida ay u muuqato, doorashadii May 2021, taas oo garabka midig ku guuleystay. Laakiin dhab ahaantii boodhadhku wuxuu ku saabsanaa Davis Cup, markii loo yareeyeyna wuxuu raacayaa farriinta: «iyo gadaal. Koobkii Davis ayaa soo noqday ».
Hadaad ogaato, waa qoraalka dareenka soo jiidanaaya, astaamaha noocaas ah ee boodhadhku ku qoran yihiin ayaa laga yaabaa inaad raadineysay. Marka ma waxaad dooneysaa inaan xoogaa fikrado kaa siino?
Astaamaha lagu qoro boosta
Kahor intaadan ku siinin noocyada xarfaha loogu talagalay waraaqaha, waxaa kugu habboon inaad ogtahay waxa ay yihiin astaamaha ay tahay inay kuwani buuxiyaan. Midka ugu horreeya ayaa ah in la doorto kuwa saxda ah. Haa, taasi waqti ayey qaadaneysaa, laakiin guuldaraysiga ayaa shaqadaada oo dhan iska tuuri kara, waana hubaal inaysan ahayn waxa aad rabto.
Way fiicantahay in, markaad isticmaaleyso font, ha ku darin noocyada kale. Boodhadhku wuxuu u muuqdaa mid isku mid ah, laakiin ma ahan dhowr iyada oo tan kaliya ee aad ku guuleysaneyso ay tahay inaad mashquuliso akhristaha, haddii aysan taasi dhab ahaan ahayn waxa aad raadineyso.
Waxay kuxirantahay fariinta, dhageystayaasha aad lahadleyso, macnaha guud ee fariinta, iwm. waa inaad doorataa mid ama xarfaha kale ee loogu talagalay boorarka. Laakiin dhammaantood waa inay u hoggaansamaan xaqiiqda ah inay fududahay in la akhriyo, xitaa meel fog; in aysan ku jahwareerin akhristaha (tusaale ahaan, maxaa yeelay ma oga in ay hal eray ama mid kale dhigteen); inay la jaan qaadayaan farriinta; ku habboon cabbirka boodhadhka (ama booska loogu talagalay qoraalka ku yaal); iyo in waxa ugu muhiimsan uu taagan yahay.
Astaamaha Qoraalka: Waraaqaha Aad Adeegsan Kartay
Hadda, waxaan kaala hadli doonnaa tusaalooyinka tusaalooyinka waraaqaha ee boodhadhka aad ka fiirsan karto inaad ku dhex haysato ilahaaga. Kuwani waa:
Font-kani wuxuu soo muuqday dhowr sano ka hor, 1967, waana sababta hadda loogu tixgeliyo nooca farta. Kuma talineyno qoraal badan, laakiin kaliya inaan istaagno.
Waxay kufiican tahay warqad ahaan boodhadhka guridda ama aad rabto inaad siiso taabasho xarrago leh oo dhalaalaya.
Avenir Pro xiga
Tani waxay ahayd 2019 mid ka mid ah waraaqaha ugu caansan ee loogu talagalay boorarka, illaa 2021 waxay umuuqataa in isbeddelku iskiis isu soo laaban doono. Way fududahay in la akhriyo oo dareenkaaga ayay qabataa, adiga oo kaa kasbanaya labo-mid-mid.
Waxaan horeyba kaaga soo sheegnay Bodoni munaasabada awgeed. Waa warqad leh adeegsiyo badan, midkoodna waa kan waraaqaha lagu dhajiyo.
Qaab-qoraalka waa xarrago, leh dhugmo dhuuban iyo dhuuban oo aad u fiiqan oo la akhrin karo. In kasta oo ay ahayd "mid caadi ah", runtu waxay tahay sida waraaqaha dhajiska inay si fiican u shaqeyso, markaa waad ku xisaabtami kartaa.
Nooc ka duug ah kii ugu horreeyay ee aan ku bilownay, waxaa sameeyay 1927 Paul Renner. Waa mid kamid ah kuwa hadda sida aadka ah loo isticmaalo waxaana isticmaala shirkadaha waaweyn sida Ikea ama Opel.
Markan waxaan ka bixi doonnaa "qadka toosan" xoogaa, maxaa yeelay nooca font waxaad leedahay dabeecad. Waxaana jira faahfaahino dhowr ah oo ka dhigaya inay muuqdaan, markaa haddii aadan haysan qoraal badan, oo aad doonaysid inay iyaduna qabato oo lafteeda naqshad yeelato, waad dooran kartaa.
Dabcan, kuma talineyno qoraallo waaweyn.
Wixii mashaariicda qaabka cyberpunk tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka la isticmaali karo. Waa warqad mustaqbal ku dhisan cilmiga xiddigiska, oo mashruucyada la xiriira mustaqbalka, meelaha, iwm. waxay ku imaan karaan si qumman.
Xaaladdan oo kale, qaabka qoraalku wuxuu siinayaa hawo gaar ah 70s daboolida buugga, taas oo, boodhadhka guridda, ay noqon karaan kuwo qumman. Sidoo kale dhallinta, dhagaystayaasha firfircoon iyo, inkasta oo ay u muuqato mid caadi ah, runtu waxay tahay in gooladaha iyo qaabab wareegsan ay aad ugu habboon tahay waxa hadda xiran.
Waraaq qurux badan
Dad badan oo da 'yar, waxaad haysataa midkan, Paper cute. Waxay yihiin waraaqo loogu talagalay boodhadhka carruurta ama dhallinta in kastoo ay qurxiyaan, haddana ay si fiican wax u akhriyaan oo ay si aan caadi ahayn u taabtaan farriinta aad rabto inaad bilowdo.
Warqad qoraal ah: Suuragal maaha
Nooc u muuqda in gacanta lagu qoray waa kan. Waa nooc aad u kala duwan oo waxaad u isticmaali kartaa oo keliya waraaqaha waraaqaha, laakiin sidoo kale qoraallada, astaamaha, sumadda ...
Waxaa jira noocyo badan oo waraaqo ah oo loogu talagalay boodhadhka, sida badan oo ay jiraan xarfaha, laakiin sababtaas awgeed waa inaad waqti u heshaa si aad uhesho midka ugu habboon mashruuca. Hadda, haddii aad leedahay noocyo iyo qaabab, way kuu fududaan doontaa inaad aragto sida ay u muuqanayso mashaariicda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Warqad waraaqo
Sida loogu biiro ama loogu biiro PDF khadka tooska ah